Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » I-Moderna CEO: Ubhubhane we-COVID-19 uza kuphela phakathi ku-2022
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • udliwano • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IGosa eliLawulayo eliyiNtloko leModerna, Inc., uStephane Bancel
Ukuba ujonga ukwanda ngokubanzi kwemveliso kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo, iidosi ezaneleyo kufuneka ukuba zifumaneke phakathi enyakeni ozayo ukuze wonke umntu kulo Mhlaba agonywe.
NgokukaStephane Bancel, imeko nge-COVID-19 ekugqibeleni iya kufana naleyo inomkhuhlane.
Ugonyo lukaModerna lwe-COVID-19 luvunyiwe kumazwe ali-100, ngelixa ikwayenye yeziyobisi ezithathu ezisetyenziswa kwiphulo lokugonya e-US.
Kuya kubakho i-jabs efumanekayo kwanakwiintsana kungekudala kunye needosi zokunyusa kwabo baya kuzifuna.
IGosa eliLawulayo eliyiNtloko leModerna, Inc., inkampani yezamayeza kunye nebiotechnology eseMelika eCambridge, eMassachusetts, uStephane Bancel, ucebise ukuba imeko nge-COVID-19 ekugqibeleni iya kufana naleyo inomkhuhlane, kwaye ukonyuka kwemveliso yokugonya kungabona Ubhubhane wecoronavirus ekugqibeleni ufikelela esiphelweni phakathi ku-2022.
"Ukuba ujonga ukwandiswa ngokubanzi kwemveliso kwimveliso kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo, kufuneka ukuba kufumaneke idosi ezaneleyo phakathi kunyaka olandelayo ukuze wonke umntu okulo Mhlaba agonywe," utshilo uBancel kudliwanondlebe.
Ngokutsho kwe-CEO ye-pharma enkulu yase-US, kuya kubakho i-jabs ekhoyo nakwiintsana kungekudala kunye needosi zokukhuthaza abo baya kuzifuna.
"Abo bangakhange bagonywe bazakugonywa ngokwabo ngokwendalo kuba umahluko we-Delta uyosulela kakhulu," utshilo umphathi omkhulu.
Xa ebuzwa ukuba abantu bazokwazi nini ukubususa lo bhubhane, osele unabantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-219 bosulelekile kwaye abangaphezu kwezigidi eziyi-4.5 bebulewe, babuyela ebomini obuqhelekileyo, uBancel waphendula wathi: “Ukusukela namhlanje, ngonyaka, ndicinga njalo.”
Kule mihlaUkugonywa kwamayeza amabini e-COVID-19 kumazwe athile ali-100, ngelixa ikwayenye yeziyobisi ezithathu ezisetyenziswa kwiphulo lokugonya e-US. Ijabha inamaqondo aphezulu okusebenza kwe-93% kwiinyanga ezintandathu emva kolawulo lwesibini ukudubula, ngokunciphileyo ukusuka kwi-94.5% exeliweyo ngexesha lesigaba sesithathu sezilingo zeklinikhi.
Nangona kunjalo, uBancel wanyanzelisa ukuba abo bagonyiweyo "ngokungathandabuzekiyo" bayakufuna ukuzihlaziya ngelinye ixesha ukuze bahlale bekhuselekile kwintsholongwane. Uthe ulindele ukuba abantu abancinci bafumane i-booster shot kanye qho kwiminyaka emithathu nakubantu abadala-kube kanye ngonyaka.
Kule mihlaIsongezelelo siqulathe isiqingatha sedosi yesithako esisebenzayo xa kuthelekiswa nenaliti yoqobo, enika inkampani elinye ithuba lokunyusa imveliso, utshilo.
“Umthamo weyeza lokugonya ngowona mqobo ubalulekileyo. Ngesiqingatha sedosi, singafumana iidosi ezizibhiliyoni ezintathu kwihlabathi lonke kulo nyaka uzayo endaweni yeebhiliyoni ezimbini kuphela, ” Kule mihla U-CEO ucacisile.
IModerna ibiphakathi kwabenzi bokuthintela abathandathu Amnesty International utyholwa ngokuxhokonxa “ingxaki yamalungelo oluntu engazange ibonwe” ngokwala ukuthatha inxaxheba kumalinge okukhulisa ubonelelo lokugonya kunye nokukhetha ukusebenzisana namazwe atyebileyo.
Ngokwengxelo ye-Amnesty International, inkampani yase-US kunye nezinto ezifana ne-Pfizer-BioNTech, uJohnson & Johnson, i-AstraZeneca kunye ne-Novavax zazibekek 'ityala kwinto yokuba kwiidosi ezi-5.76 zezigidigidi ezilawulwa kwihlabathi liphela, yi-0.3% kuphela eya kumazwe anengeniso ephantsi .
UNick Eckerling uthi:
Oktobha 3, 2021 kwi-18: 27
I-COVID iya kwenza